August 5, 2021 - Babal Khabar
हेर्नुस एकदमै भाईरल टिकटक भिडियो,रातारात लाखौले हेरे(भिडियो हेर्नुस)
आजभोलि सामाजिक संजाल अन्तरगत विभिन्न किसिमका संजालहरू छन्। जसअन्तर्गत हाम्रो परिबेशमा फेसबुक अत्यन्तै लोकप्रिय संजाल नेटवर्क भित्र पर्छ। सर्वाधिक जनसंख्याले यो संजालभित्र जोडिएका छन्। त्यसगरी पछिल्लो समय यता टिकटक पनि सर्वाधिक रुचाइएको सामाजिक संजाल भित्र पर्ने गर्दछ।अधिकांश जनसंख्या जहाँ बुढाबुढी देखि लिएर केटाकेटीसमेत जोडिएर आफ्नो छोटो कला प्रश्तुत गर्ने साथै अरुले अपलोड गरेका भिडियो तथा गीतमा अभिनय गरेको पर्याप्त भेटिन्छन्।गोपाल कृति माझी बनेर खोला किनारमा आए। उनकी श्रीमती नमु न्यौपानेले नाचेर उनलाई साथ दिइन्। छोरीले भिडिओ खिचिन्। माछीलाई खोलीको लेउ’ गीतमा यो दम्पतीले बनाएको टिकटक भिडिओ अहिले भाइरल छ। चार दिनअघि युट्युबमा सार्वजनिक हरिवंश आचार्य र मेलिना राईले गाएको यो गीतको भिडिओ जसरी ट्रेन्डिङमा छ, गोपाल र नमुको भिडिओ पनि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छ। मान्छेहरूले उनीहरूको अभि
कुलमान हुदा ११ अर्ब नाफा अहिले ५ अर्ब घाटा,, कसलाई रोज्नुहुन्छ ?
काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा दोब्बरले घटेको छ । गत वर्ष ११ अर्ब ६ करोड नाफा कामएको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नाफा ५ अर्बमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चुहावट बढ्दा नाफामा असर परेको बताए । नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्राधिकरणमा स्वागत गर्दै शाक्यले सुख्खा मौसममा प्राधिकरणका आयोजनाहरुबाट उत्पादन घटेको कारण पनि नाफा खु’म्चिएको बताए । आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण भारतबाट हुने विद्युत आयात बढेको र महामारीका कारण मिटर रिडिङ पनि प्रभावित भएकाले नाफा खु’म्चिएको शाक्यको स्पष्टी’करण थियो ।प्राधिकरणले गत आवर्थि वर्षसम्म ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको थियो । सरकारले आव २०६७/०६८ सम्मको सञ्चित घा’टा करिब २७ अर्व रुपैयाँ अपलेखन गरिदिएपछि घा’टामा गइरहेको थियो । आव २०
एजेन्सी । बङ्गलादेशमा एउटा विवाह भोज कार्यक्रमका लागि जाने क्रममा चट्याङ पर्दा सहभागी १६ जनाको मृत्यु भएको छ । स्थानीय अधिकारीका अनुसार सो घटनामा परी बेहुलासहित अरु केही व्यक्ति भने घाइते भएको जनाइएको छ । उत्तरी बङ्गलादेशको शिवगन्जमा रहेको पद्मा नदीमा एउटा डुङ्गाबाट ओर्लिएर बेहुला पक्षका जन्ती बेहुलीको घरतिर जाने क्रममा आँधीवेहरीसहितको वर्षा भएको र उनीहरूमाथि चट्याङ खसेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । एक स्थानीय अधिकारीले बेहुला र बेहुली सुन्दरपुरका बासिन्दा भएको जानकारी दिएका छन् । दुलही विवाह समारोहमा उपस्थिति भइनसकेकीले कुनै असर नपरेको स्थानीय अधिकारी शकिब–अल–राबीले एएफपी समाचार समितिलाई जानकारी दिएका छन् । हाल केही दिनयता भीषण मनसूनी आँधीवेहरीसहितको वर्षाले बंगलादेशलाई प्रभावित पारेको छ । कोक्सबजारको दक्षिणपूर्वी जिल्लामा एक हप्तादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण रोहिङ्ग्या शरणा
ठिक कि बेठिक ? ? ? प्रतिकृया दिनुहोस्् साउन २३ देखि २९ गतेसम्म देशभर मास्क अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यही साउन २३ देखि २९ गतेसम्म देशभर मास्क अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । ‘महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा मेरो प्रतिबद्धता मास्क लगाउनु नै आजको आवश्यकता’ भन्ने मूलनाराका साथ मन्त्रालयले अभियान सञ्चालन गर्न थालेको हो । मन्त्रालयले मास्क लगाई मानिसको व्यवहारमा परिवर्तन गर्न अभियान सञ्चालन गर्न थालेको बताइएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले कोरोना भाइरसबाट बच्न मास्क अभियान सञ्चालन गर्न थालिएको बताउनुभयो । उहाँले जनस्वास्थ्यमा मापदण्ड उल्लघङ्न भएको र मास्क लगाउन पनि लापरवाही गरेकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड तथा मास्कको महत्वबारे जानकारी गराउन अभियान शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । “महामारी नियन्त्रणमा खोप जतिकै मास्क, सेनिटाइजरसंँग जनस्वास्थ्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सबै नेपालीलाई महामारी नियन्त्रणमा म
वैज्ञानिकहरुले यसरी पानीबाट बनाए सुन !हेर्नुहोस्।
२१ साउन, काठमाडौं । प्राचीन कालदेखि नै धातुहरु तथा रसायनहरुको मिश्रणबाट सुन बनाउने धेरै प्रयासहरु भएका छन् । विभिन्न अन्य धातुबाट सुन बनाउने यस्तो विधिलाई अल्केमी अर्थात् रस विधा भनिन्छ । वैज्ञानिकहरुले अन्ततः यो विधामा पहिलो सफलता प्राप्त गरेका छन् । वैज्ञानिकहरुले पानीबाटै पहिलोपटक सुन बनाउन सफल भएका छन् । चेक गणतन्त्रको राजधानी प्रागस्थित चेक एकेडेमी अफ साइन्सेसका भौतिक रसायनविद‌्हरुले क्षारीय धातुको सहयोगमा यसरी पानीलाई सुनौलो चम्किलो धातुमा बदलेका हुन् । क्षारीय धातु भनेको सोडियम पोटासियम जस्ता प्रतिक्रियाशील तत्वहरुको समूह हो । पानीको सम्पर्कमा आउँदा यस्ता क्षारीय धातु विस्फोटक बन्दछन् । त्यसैले यस्तो प्रयोग तयार गरियो जसबाट यस्ता क्षारीय धातु र पानीबीचको प्रतिक्रिया सुस्त भएर विस्फोट नहोस् । त्यसक्रममा एक सिरिन्जमा पोटासियम र सोडिएम भरियो, जुन सामान्य तापक्रममा तरल हुन्छ । त्यसल
कलेज मै यस्तो चो’खो भन्ने केही र’हेन, तपाईं यो भिडियो हे’रेर के भन्नुहुन्छ ?(हेर्नुस् भिडियो)
चो’खो भन्ने केही र’हेन, तपाईं यो भिडियो हे’रेर के भन्नुहुन्छ ?(हेर्नुस् भिडियो) काठमाडौं । संसार परिवर्तन भएको छ, साथ यो अनलाइन साइटहरु र वेब पृष्ठहरु को प्रभाव आउँछ। राम्रो ब्लग र साइटहरू दोस्रो पुस्तक हो जहाँबाट हामी बढि जान्छौं, हामी त्यो चीज जान्छौं, । जुन हामीले अहिले सम्म सिकेका छैनौं वा सुनेका छैनौं। अन्य राम्रो साइटहरू जस्तै, ओन्नेप।चाखलाग्दो, नयाँ र अनुपम लेखहरू प्रकाशित गर्दछ।हामी पनि अद्वितीय भिडियो समाचार, डिजिटल मार्केटिंग मा आधारित लेख, खेलकुद समाचार र अधिक धेरै प्रकाशित। हाम्रो मुख्य अभिप्राय दर्शकहरूलाई नयाँ र अनुपम सामग्री साझा गर्नु हो। ******पूरा भिडियोहेर्नयहाँ क्लिक गर्नुस****** अर्को खबर काठमाडौँ / जीवनको सङ्घर्षमा खट्ने र डट्ने व्यक्ति नै सफल कहलिन्छ । उनी सफल छिन् । अत्यधिक सम्पत्ति, घरभरी विलासी सामान र महँगा गरगहना भएका कारण उनी सफल कहलाएकी होइनन् । अहि
जुन भिडीयो ७० लाख बढीले हेरे ! विशेष के छ त यो भिडियोमा ?(हेर्नुहोस उक्त भिडीयो ) पछिल्लो समय मानि’सहरुमा भि’डियो शेयरिङ मोबाइल एप टिकटकको लोकप्रियता बढी नै छ । छोटो भि’डियो लिपसिङ सेयरिङ्ग एप टिकटकमा भि’डियो अपलोड गर्नेहरुको संख्या पनि उत्तिकै छ । विभिन्न किसिम’बाट बनाइएका टिकटक भि’डियो तीव्र रुपमा सामा’जिक सञ्जालमा भाइरल भइहाल्छन् । यस्तै एउटा भिडियो अहिले भाइर’ल भएको छ । उक्त टिकटक भिडियोमा एक युवतीले नृ,त्यु गरिरहेकी हुन्छिन् । उनको नृ,त्यका का,रण उक्त टिक`टक भिडि’योले चर्चा पाएको नभइ भिडियोमा देखिएको एउटा दृश्यले सबैको ध्यान तान्नु’का साथै चकित पारेको छ । विशेष के छ त भिडियोमा ?? भान्सा कोठा’मा ती युवतीले नाचेको भि’डियो बना’उँदै गर्दा उनको पछाडि रहेको सि’सामा एक छायाको दृश्य देखिन्छ । उक्त दृश्यलाई भूत भएको बताइएको छ । भि’डियोमा देखिएको उक्त छा’याको दृश्यका कारण ती युवती पनि
छोरी जन्माउँछु भन्दै नाम राखेर कपडा समेत किने, छोरा पाएपछि प्रियंका’आयुष्मान अक्क न बक्क प्रियंका कार्की र आयुष्मानले छोरी जन्माउँछु भन्दै आयंका नाम राखेर छोरीका कपडा समेत किने, तर छोरा पाएपछि प्रियंका र आयुष्मान अक्क न बक्क, सुनकै मान्छे पाउने झै हल्ला पिटेकै थिइन् मान्छे नै फाइन् भन्दै फ्यानले गिज्याए । नायिका प्रियंका कार्की धेरै चर्चामा पनि रहिन उनले फोटो पोस्ट गरेका कारण आलोचना पनि भयो प्रियंका कार्कीले तर केहि वास्ता गरिनन् । उनले छोरीनै पाउँछु भनेर कपडा समेत किनिन नाम समेत राखिन तर छोरा पाएपछि ऐले अक्क न बक्क छिन तर जे भएपनि नायिका प्रियंका कार्कीलाई बधाई अर्को खबर पुर्वयुवराज पारश शाहले बिना हेल्मेट मोटरसाइकल चलाइरहेका अवस्थामा गत शुक्रबार साँझ महाराजगञ्जको नारायण गोपाल चौकमा ट्राफिक प्रहरीले सोधपुछ गर्ने क्रममा शाहले दुर्व्यवहार गरेको भनिएको भिडियोले सामाजिक संजाल निकै ता